တစ္ဆေမကြောက်သော ကိုရင်ပဏ္ဍိ နဲ့ သင်္ကန်း မကြောက်သော တစ္ဆေ တို့ တွေ့သော အခါ…။ – Lawkathuta
တစ္ဆေမကြောက်သော ကိုရင်ပဏ္ဍိ နဲ့ သင်္ကန်း မကြောက်သော တစ္ဆေ တို့ တွေ့သော အခါ…။
ပရလောကအကြောင်းများ May 18, 2018
သင်္ကန်း မကြောက်ေ သာ တစ္ဆေ နဲ့ တေ စ္ဆ မကြောက်ေ သာ ကိုရ င်ပ ဏ္ဍိ တို့ တွေ့ သော အခါ
ကျွန်တော်ကိုရင်စ၀တ်တဲ့အရွယ်က အသက်၁၀နှစ်အရွယ် ၀တ်တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျွန်တော်တို့နယ်တစ်ခွင်မှာ နာမည်ကြီး ဘာနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့ သရဲအရမ်းခြောက်တယ် ဆိုပီး သတင်းမွှေးတယ် တကယ်လဲ ခြောက်တယ် ခြောက်တဲ့သရဲတွေက ကိုရင် ဦးဇင်းတွေတောင်မကြောက်ဘူး ဘုရားသားတော်တွေတောင် ခြောက်ခံထိတယ်
ဘုန်းကြီးကျောင်းက ပရိယတ္တိစာသင်ကျောင်းဆိုတော့ စာသင်သားတွေလဲ စုံတယ် နယ်ပေါင်းစုံက လာတဲ့ကိုရင်တွေ ဦးဇင်းတွေ များသောအားဖြင့် ပအိုဝ့်တိုင်းရင်းသားတွေပိုများတယ် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အဆောင်၃ဆောင်ရှိတယ်
အဆောင်၃ဆောင်လုံး သရဲခြောက်တယ် ကျွန်တော်ကလဲ ကိုရင်စ၀တ်ခါစဆိုတော့ ညဖက်တွေဆို ရွယ်တူကိုရင်လေးတွေ ရှိတဲ့ အဆောင်မှာ သွားအိပ်တယ် အဲဒီထဲမှာ ကိုရင်ပဏ္ဍိ ကိုတော့ အခင်ဆုံးပဲ အသက်က ၁၁နှစ်လောက်ရှိပြီး သရဲတစ္ဆေလဲမကြောက်တတ်ဘူးတစ်ည ကျွန်တော်ကို
ကိုရင် သရဲကြောက်တတ်လား နည်းနည်းတော့ကြောက်တယ် သရဲတွေ့ဖူးလား မတွေ့ဖူးဖူး အဲဒါဆို ဒီညပြမယ် ကြည့်မလားတဲ့.ကျွန်တော်လဲ ကြည့်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အဲဒါဆို တပည့်တော် နှိုးတဲ့အခါထကြည့် အခုတော့ အိပ်တော့ဆိုပြီးပြောတယ်.နေ့လည်က ကစားထားတော့ မောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်
ဘယ်လောက်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး ကိုရင်ထထထ ခဏနေဒီကောင်တွေ ထွက်လာတော့မယ်..ဆိုပီးနှိုးတော့မှ နိုးလာတယ်
ပဏ္ဍိ သရဲက ဘယ်ကထွက်လာမှာလဲ အခုက ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာလေ သရဲကအပြင်မှာရှိတာ မဟုတ်ဘူးလား
ဘယ်ကလာ သရဲက ဒီအဆောင်ထဲမှာရှိတာ.. အောက်ထပ်မှာ ခဏနေထွက်လာတော့မှာ လာလာ ဆိုပြီး နှစ်ယောက်သား လှေကားအဆင်းနားကနေ ချောင်းနေတ အောက်ထပ်မှာက ကိုရင်ကြီးတွေ အိပ်နေတဲ့ ကုတင်တွေရှိတယ်…လှေကားအောက်မှာတော့ လွတ်နေတာပေါ့ခဏနေ ပဏ္ဍိက ကိုရင် ဒီကောင်တွေလာပီ သေချာကြည့်.အဲလိုလဲပြောပြီးကော
လှေကားအောက်ကနေ ထွက်လာတာဗျာ အများကြီးပဲ ဒါပေမယ့် ထင်ထားသလို ကြောက်စရာပုံတွေမဟုတ်ဘူး
၀က်တွေဗျာ ၀က်တွေ အရွယ်တွေစုံနေတာပဲ အကောင်သေးသေးကစ အကောင်ကြီးကြီးထိ မရှိဘူးဆို အကောင်၂၀လောက်ရှိမယ်
လှေကားအောက်ကနေ ပြေးထွက်ပြီး အဆောင်ဒေါင့်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ကုတင်အောက်ထဲကို ပြေးဝင်သွားကြတာ
ကျွန်တော်ဆို အံ့သြလွန်းလို့ စကားတောင်မပြော နိုင်ဘူး. နောက်တော့ ကိုရင်ပဏ္ဍိကို မေးတာ.အဲဒီဝက်တွေက ဘာတွေလဲ ပဏ္ဍိ.အဲဒါတွေက မကောင်းဆိုးဝါးတွေပုံစံပြောင်းထားတာ သူတို့က ညတိုင်းမထွက်ဘူး.လပြည့်နေ့မှ ထွက်တာငါတောင်အပေါ့ထသွားရင်းတွေ့လို့ သိရတာ ကျန်တဲ့ကိုယ်တော်တွေ မသိသေးဘူး။
ပဏ္ဍိကလဲ အဲဒါက ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးအုလိုပြောတော့ ပဏ္ဍိကဒီအဆောင်မှာက ဒီလိုကောင်တွေပဲရှိတယ် အလယ်ဆောင်မှာဆိုပိုဆိုးတယ် နောက်နေ့ အဲဒီအဆောင်မှာ သွားအိပ်မယ် အဲဒီအခါကျမှ လန့်မအော်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအဆောင်မှာ သရဲတစ်ကောင်ရှိတယ်. ငါ့ကိုတောင် စရောက်တုန်းက ခြောက်သေးတယ်အိပ်နေရင် သင်္ကန်းကိုလာလာဆွဲတယ် နောက်ပီးခြေထောက်လဲ လာလာဆွဲတယ်. သူဒီမှာရှိကြောင်းပြတာဖြစ်မယ်ထင်တယ် နောက်ပိုင်းငါ့ကိုမခြောက်တော့ဘူး ။
ကိုရင်အသစ်တွေဆိုရင် အဲဒီအဆောင်မှာ သွားမအိပ်ရဲဘူး ဟိုတစ်လောက ကိုရင်အဂ္ဂ အဲဒီအဆောင်မှာအိပ်နေရင်း တီဗီကြည့်နေတာသူခေါင်းအုံးထားတာက ဖက်ခေါင်းအုံး…
နောက်တီဗီကြည့်နေရင်း ဖက်ခေါင်းကိုစမ်းမိတာ ဖက်ခေါင်းအုံး မဟုတ်တော့ပဲ လက်ပြတ်ကြီးပေါ်ကို ခေါင်းတင်ပြီး အိပ်နေတာ. အဂ္ဂတစ်ယောက်အော်ပြီးပြေးတာ.. နောက်နေ့ တွေ အဲဒီအဆောင်ကိုမသွားရဲတော့ဘူး။
အော်အဲလိုလား ဒီညသွားအိပ်မယ်လေ ပဏ္ဍိ မင်းပါလိုက်ပေး အေးပါကွာ ငါလိုက်အိပ်ပေးမယ် ခြောက်ခံထိရင် ထွက်မပြေးနဲ့နော် ဟဟဟဟအဲဒီည ကျွန်တော်ရယ် ပဏ္ဍိရယ်..
အဲဒီအဆောင်မှာနေတဲ့ ဦးဇင်းဆီမှာ တီဗီကြည့်မလို့ဆိုပြီး ခွင့်တောင်းပြီး နေကြကော အချိန်နည်းနည်းလင့်တော့ မပြနါတော့ဘူးဒီမှာပဲအိပ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ ဦးဇင်းက ကိုရင်လေးဖြစ်ပါ့မလား. နေရဲလို့လား..နေရဲတယ် ဦးဇင်း. ပဏ္ဍိလဲပါနေတာပဲ တပည့်တော်ဘာမှလုပ်တာမှမဟုတ်တာ…
ဒါဆိုလဲ အိပ်ကွာ ခြင်ထောင်တော့မရှိဘူး.ခြင်ဆေးထွန်းအိပ်ဆိုပြီး ပေးအိပ်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ပဏ္ဍိလဲ ဖျာခင်းပြီး အိပ်ကော…
ကျွန်တော်ကတော့ မအိပ်ခင် စိတ်ထဲကနေ ဒီအဆောင်မှာရှိတဲ့သူက ဘယ်လိုပုံစံလဲမသိဘူး. မြင်ရရင်ကောင်းမယ်အဲလိုတွေးပီး.မအ်ိပ်ခင်ဘုရားရှိခိုး. ပဏ္ဍိဘေးမှာဝင်တိုးအိပ်တာပဲအိပ်မပျော်ခင် ပဏ္ဍိကို..ပဏ္ဍိငါလက်တို့ရင် ထနော် အိပ်ပုတ်ကြီးမနေနဲ့…
အေးပါကွာ ငါမအိပ်ပါဘူး တစ်ခုခုထူးခြားရင် ခက်ကုတ်လိုက် မင်းဘေးမှာငါရှိနေတာပဲအဲဒါဆိုလဲပြီးရောဆိုပီးအိပ်လိုက်တာ
မှေးခနဲဖြစ်တဲ့အချိန် သင်္ကန်းကိုလာဆွဲသလိုခံစားလိုက်ရတယ် မျက်လုံးကမဖွင့်ကြည့်ရဲဘူး. အဲဒါနဲ့ဘေးက ပဏ္ဍိကို လက်ကုတ်လိုက်တယ် ခဏနေတော့ ပဏ္ဍိက သူသိကြောင်းလက်ပြန်ကုတ်တယ်ခဏနေတော့ သင်္ကန်းလာပြန်ဆွဲပြန်ရော သင်္ကန်းကလေထဲမှာလွှင့်နေသလို ခံစားမိတော့..
မျက်လုံးအသာလေးဖွင့်ကြည့်တာ တကယ်အဟုတ်ပဲ. သင်္ကန်းက လေထဲမြောက်နေတာ တစ်ယောက်ယောက်ဆွဲနေသလိုပဲ အကောင်အထည်တော့မမြင်ရဘူး ပဏ္ဍိလဲတွေ့တယ်. အဲဒီအချိန် ၀ုနးဆို ပဏ္ဍိ မတ်တပ်ထရပ်ပြီး အဲဒီသင်္ကန်းဘေးကို ပြေးသွားပြီး လက်သီးနဲ့ထိုးနေတာ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ ပဏ္ဍိတစ်ယောက်ထဲ…
ကြမ်းပေါ်မှာလိမ့်နေတာ ပါးစပ်ကလဲ အော်နေတာမင်းလားကွ ..ဆိုပြီး လေထဲကိုထိုးနေတာ… ခဏကြာတော့ အသံတွေကြားလို့ အပေါ်ထပ်မှာ အိပ်နေတဲ့စာချဆရာတော်ဆင်းလာမ.ပဏ္ဍိလဲ အထိုးရပ်လိုက်တယ်. တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ချွေးတွေ ရွှဲနစ်နေတာပဲ
ဟဲ့ ပဏ္ဍိ ဘာဖြစ်တာလဲ.ဘုရား ဘယိကကောင်လဲမသိဘူး တပည့်တော့သင်္ကန်းလာဆွဲလို့ ကြည့်လိုက်တာ.. မဲမဲပုပု အကောင်တစ်ကောင် ဖြစ်နေတာ တစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်ဘူး လာလာဆွဲနေတာ..အဲဒါအဲဒီကောင်က တပည့်တော်ကို ထိုးမလားဆိုပြီး စိန်ခေါ်တာ တပည့်တော်လဲ ဒေါသထွက်ပြီး ထိုးနေတာ သူကိုထိုးရတာ ဖွဲအိတ်ကိုထိုးနေရသလိုပဲ ကြာလာတော့ မောလာတယ်။
သူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဦးဇင်းနိုးလာမှ ဒီကောင် တံခါးဟထားတဲ့ ကြားကနေ ပြေးဆင်းသွားတယ် ။ကျွန်တော်လဲ ပဏ္ဍိပြောတာကို ပါးစပ်အဟောာင်း သားနဲ့နားထောင်နေတာ..
ကျွန်တော်က ဘာမှကို မတွေ့တာ. အဲတော့မှ ဦးဇင်းက ဒီကောင် ဘာလာလုပ်ပြန်ပီလဲမသိဘူးဦးဇင်း ဒီကောင် အဲလိုလိုက်စနေလို့ မောင်းထုတ်ထားတာ…
အဲဒီကောင်က စနောက်ရတာသဘောကျတယ် ထင်တယ် ဒီကျောင်းကို ဘယ်သူမှမလာရဲအောင် ကိုစနောက်တော့တာပဲ.ကဲကဲ ပြန်အိပ်တော့ ဦးဇင်းလာအိပ်ပေးမယ်ဆိုပီး ဦးဇင်းက ကျွန်တော့်ကိုအလယ်မှာထားပြီး လာအိပ်ပေးတယ်…
မနက် အာရုဏ်တက်တော့ ပဏ္ဍိက ကိုရင်ထထထအာရုဏ်ဆွမ်းကြွရမယ်မျက်နှာသစ် .သင်္ကန်းရုံဆိုပြီးလာနှိုးတော့မှာ ကောက်ထပြီး မျက်နှာသစ်.. သင်္ကန်းရုံပြီး အာရုဏ်ဆွမ်းကြွ လိုက်သွားတာ.. ကိုရင်တွေအားလုံးတန်းစီပြီးကြွရတယ် ….
ကျွန်တော်က ၀ါစဉ်အနည်းဆုံးဆိုတော့ နောက်ဆုံး.. ကျွန်တော်ရှေ့မှာကတော့ ပဏ္ဍိ အဲလိုကြွလာတာ အပြန်ကျတော့ အိမ်သာတက်ချင်လာကေ. ကျောင်းကလဲ လမါးတစ်ကွေ့ကျန်သေးတယ်…
ဒါပေမယ့် ဘုရားပေါ်ကဖြတ်သွားရင် နီးနီးလေး အဲဒါနဲ့ ပဏ္ဍိကို ခေါ်ပြီး ဘုရားပေါ်ကနေ ဖြတ်တာ အချိန်က အလင်းရောင် မှုန်မှုန်လေးပဲမြင်နေရသေးတာဘုရားပေါ်မှာလဲ မှောင်နေတာ ဘုရားပေါ်ကနေဖြတ်လာတော့. …
ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲအ၀င်နားက သရက်ပင်အောက် ရောက်ကောဒီတစ်ခါကျွန်တော်မြင်လိုက်တာ ပဏ္ဍိ ဟိုမှာ ဘာကောင်လဲ တွေ့လားသရက်ပင် အောက်မှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာ မျောက်လားမသိဘူး.
မှောင်လဲမှောင်နေတော့ သိပ်မသဲကွဲဘူးပဏ္ဍိက သေချာကြည့်ပြီး ဟာဟိုကောင် ညကကောင်ငါ့ကိာစောင့်နေတာဖြစ်မယ်။
ရော့ သပိတ်ကိုင်ထား.. ဒီမှာရပ်နေဆိုပြီး ခါးပန်းကြိုးကိုဖြုတ်ပြီး အဲဒီမဲမဲကောင်ကို လိုက်ရိုက်တာ. မဲမဲကောင်က ပထမတော့ ပဏ္ဍိကို ပြန်လုံးတယ်… ဒါပေမယ့် အနားမရောက်ဘူး…
ပဏ္ဍိကနေပြီး ခါးပန်းကြိုးနဲ့ ဆီးရိုက်တ. ဖြန်းဖြန်းဖြန်း …အဲလို၃ချက်လောက်ထိကော ဟိုကောင် ၀င်မလုံး တော့ပဲ မြေကြီးမှာလိမ့်နေအောင်အော်နေတာပဏ္ဍိကလဲ ဘာမှတ်နေလဲ မှတ်ထား .
အဲဒါဆရာတော် ခါးပန်းကြိုးကွ ဆိုပြီး ပြောလဲပြော ရိုက်လဲရိုက် ခဏနေတော့ဟိုမဲမဲကောင်က ထပြေးတာ. ဘုရားဘေးက ဇရပ်ပျက်အနောက် ထဲကိုဝင်ပြေးသွားတာ ခဏနေတော့ ပဏ္ဍိ သပိတ်လာပြန်ယူတော့ ပဏ္ဍိ မင်းဆရာတော်ခါးပန်းကြိုးဘယ်လိုရလာတာလဲ..
ဟဲဟဲ ဒီကောင် ဒီညထပ်လာရင် ရိုက်မလို့ ဆရာတော် လှမ်းထားတဲ့ ခါးပန်းကြိုးခဏဖြုတ်လာတာ ဒီကောင်က ညထိမစောင့်ပဲ ပေါ်လာတော့ ခါးပနါးကြိုးစာ ကျွေးလိုက်တာပေါ့
အဲဒါနဲ့ သပိတ်ကိုယ်စီလွယ်ပြီး ဆွမ်းစားဆောင်ထဲ ၀င်တော့ ဆရာတော် ကြိမ်လုံးကိုင်ပြီးစောင်နေ့တယ် လာခဲ့ ၂ကောင်လုံးဆိုပြီး …ပဏ္ဍိကိုတော့ ခါးပန်းကြိုးကို ပိုင်ရှင်မသိပဲ ယူတာ ခိုးတာပဲဆိုပြီး တရွှမ်းရွှမ်းနဲ့ ဗျင်းတော့တာပဲ. …
ကျွန်တော်ကိုတော့ ဒုလ္လဘ မို့လို့ မရိုက်တော့ဘူး ခေါင်းကိုပဲ ဒေါက်ကနဲ မြည်အောင် ခေါက်ပြီး သွား ဆွမ်းသွားစားတော့..နောက်နေ့ကစပြီး ကျွန်တော်လဲ ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့မှာမို့လို့ လူဝတ်ထွက်လိုက်ရတယ် ပဏ္ဍိကတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျန်ခဲ့တယ်. ကျွန်တော်လဲ အချိန်ရရင် ရသလို ပဏ္ဍိနဲ့သွားတွေ့ပါတယ်။
ပဏ္ဍိလဲ ဓမ္မာစရိယတန်းအထိရောက်ခဲ့တယ်.. နောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ် အခုသတင်းကြားတာက လူထွက်ပြီး မိန်းမရနေပီလို့ ကြားတယ်. ခုထိ ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူး ။
ဆရာတော်ကတော့ ကျွန်တော် ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမင်းသူငယ်ချင်း ပဏ္ဍိတော့ မိန်းမရသွားပီကွ မင်းပဲကျန်တော့တယ်လို့ အမြဲပြောတယ်။
အခုရေးတဲ့စာကို တိုက်ဆိုင်လို့ ပဏ္ဍိ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရင် ငါ့ဆီကို ဆက်သွယ်ပေးပါသတိရတယ်ကွာငယ်ငယ်တုန်းက အချိန်တွေကို
Credit:ဇယန ( ရာမည )
သင်ျကနျး မကွောကျေ သာ တစ်ဆေ နဲ့ တေ စ်ဆ မကွောကျေ သာ ကိုရ ငျပ ဏ်ဍိ တို့ တှေ့ သော အခါ
ကြှနျတျောကိုရငျစဝတျတဲ့အရှယျက အသကျ၁ဝနှဈအရှယျ ဝတျတဲ့ဘုနျးကွီးကြောငျးက ကြှနျတျောတို့နယျတဈခှငျမှာ နာမညျကွီး ဘာနာမညျကွီးလဲဆိုတော့ သရဲအရမျးခွောကျတယျ ဆိုပီး သတငျးမှေးတယျ တကယျလဲ ခွောကျတယျ ခွောကျတဲ့သရဲတှကေ ကိုရငျ ဦးဇငျးတှတေောငျမကွောကျဘူး ဘုရားသားတျောတှတေောငျ ခွောကျခံထိတယျ
ဘုနျးကွီးကြောငျးက ပရိယတ်တိစာသငျကြောငျးဆိုတော့ စာသငျသားတှလေဲ စုံတယျ နယျပေါငျးစုံက လာတဲ့ကိုရငျတှေ ဦးဇငျးတှေ မြားသောအားဖွငျ့ ပအိုဝျ့တိုငျးရငျးသားတှပေိုမြားတယျ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ အဆောငျ၃ဆောငျရှိတယျ
အဆောငျ၃ဆောငျလုံး သရဲခွောကျတယျ ကြှနျတျောကလဲ ကိုရငျစဝတျခါစဆိုတော့ ညဖကျတှဆေို ရှယျတူကိုရငျလေးတှေ ရှိတဲ့ အဆောငျမှာ သှားအိပျတယျ အဲဒီထဲမှာ ကိုရငျပဏ်ဍိ ကိုတော့ အခငျဆုံးပဲ အသကျက ၁၁နှဈလောကျရှိပွီး သရဲတစ်ဆလေဲမကွောကျတတျဘူးတဈည ကြှနျတျောကို
ကိုရငျ သရဲကွောကျတတျလား နညျးနညျးတော့ကွောကျတယျ သရဲတှဖေူ့းလား မတှဖေူ့းဖူး အဲဒါဆို ဒီညပွမယျ ကွညျ့မလားတဲ့.ကြှနျတျောလဲ ကွညျ့မယျဆိုပွီးပွောလိုကျတယျအဲဒါဆို တပညျ့တျော နှိုးတဲ့အခါထကွညျ့ အခုတော့ အိပျတော့ဆိုပွီးပွောတယျ.နလေ့ညျက ကစားထားတော့ မောမောနဲ့အိပျပြျောသှားတယျ
ဘယျလောကျအိပျပြျောသှားလဲမသိဘူး ကိုရငျထထထ ခဏနဒေီကောငျတှေ ထှကျလာတော့မယျ..ဆိုပီးနှိုးတော့မှ နိုးလာတယျ
ပဏ်ဍိ သရဲက ဘယျကထှကျလာမှာလဲ အခုက ဘုနျးကွီးကြောငျးထဲမှာလေ သရဲကအပွငျမှာရှိတာ မဟုတျဘူးလား
ဘယျကလာ သရဲက ဒီအဆောငျထဲမှာရှိတာ.. အောကျထပျမှာ ခဏနထှေကျလာတော့မှာ လာလာ ဆိုပွီး နှဈယောကျသား လှကေားအဆငျးနားကနေ ခြောငျးနတေ အောကျထပျမှာက ကိုရငျကွီးတှေ အိပျနတေဲ့ ကုတငျတှရှေိတယျ…လှကေားအောကျမှာတော့ လှတျနတောပေါ့ခဏနေ ပဏ်ဍိက ကိုရငျ ဒီကောငျတှလောပီ သခြောကွညျ့.အဲလိုလဲပွောပွီးကော
လှကေားအောကျကနေ ထှကျလာတာဗြာ အမြားကွီးပဲ ဒါပမေယျ့ ထငျထားသလို ကွောကျစရာပုံတှမေဟုတျဘူး
ဝကျတှဗြော ဝကျတှေ အရှယျတှစေုံနတောပဲ အကောငျသေးသေးကစ အကောငျကွီးကွီးထိ မရှိဘူးဆို အကောငျ၂ဝလောကျရှိမယျ
လှကေားအောကျကနေ ပွေးထှကျပွီး အဆောငျဒေါငျ့ဆုံးမှာ ရှိနတေဲ့ကုတငျအောကျထဲကို ပွေးဝငျသှားကွတာ
ကြှနျတျောဆို အံ့သွလှနျးလို့ စကားတောငျမပွော နိုငျဘူး. နောကျတော့ ကိုရငျပဏ်ဍိကို မေးတာ.အဲဒီဝကျတှကေ ဘာတှလေဲ ပဏ်ဍိ.အဲဒါတှကေ မကောငျးဆိုးဝါးတှပေုံစံပွောငျးထားတာ သူတို့က ညတိုငျးမထှကျဘူး.လပွညျ့နမှေ့ ထှကျတာငါတောငျအပေါ့ထသှားရငျးတှလေို့ သိရတာ ကနျြတဲ့ကိုယျတျောတှေ မသိသေးဘူး။
ပဏ်ဍိကလဲ အဲဒါက ကွောကျဖို့မကောငျးဘူးအုလိုပွောတော့ ပဏ်ဍိကဒီအဆောငျမှာက ဒီလိုကောငျတှပေဲရှိတယျ အလယျဆောငျမှာဆိုပိုဆိုးတယျ နောကျနေ့ အဲဒီအဆောငျမှာ သှားအိပျမယျ အဲဒီအခါကမြှ လနျ့မအျောနဲ့ဘာဖွဈလို့လဲ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအဆောငျမှာ သရဲတဈကောငျရှိတယျ. ငါ့ကိုတောငျ စရောကျတုနျးက ခွောကျသေးတယျအိပျနရေငျ သင်ျကနျးကိုလာလာဆှဲတယျ နောကျပီးခွထေောကျလဲ လာလာဆှဲတယျ. သူဒီမှာရှိကွောငျးပွတာဖွဈမယျထငျတယျ နောကျပိုငျးငါ့ကိုမခွောကျတော့ဘူး ။
ကိုရငျအသဈတှဆေိုရငျ အဲဒီအဆောငျမှာ သှားမအိပျရဲဘူး ဟိုတဈလောက ကိုရငျအဂ်ဂ အဲဒီအဆောငျမှာအိပျနရေငျး တီဗီကွညျ့နတောသူခေါငျးအုံးထားတာက ဖကျခေါငျးအုံး…
နောကျတီဗီကွညျ့နရေငျး ဖကျခေါငျးကိုစမျးမိတာ ဖကျခေါငျးအုံး မဟုတျတော့ပဲ လကျပွတျကွီးပျေါကို ခေါငျးတငျပွီး အိပျနတော. အဂ်ဂတဈယောကျအျောပွီးပွေးတာ.. နောကျနေ့ တှေ အဲဒီအဆောငျကိုမသှားရဲတော့ဘူး။
အျောအဲလိုလား ဒီညသှားအိပျမယျလေ ပဏ်ဍိ မငျးပါလိုကျပေး အေးပါကှာ ငါလိုကျအိပျပေးမယျ ခွောကျခံထိရငျ ထှကျမပွေးနဲ့နျော ဟဟဟဟအဲဒီည ကြှနျတျောရယျ ပဏ်ဍိရယျ..
အဲဒီအဆောငျမှာနတေဲ့ ဦးဇငျးဆီမှာ တီဗီကွညျ့မလို့ဆိုပွီး ခှငျ့တောငျးပွီး နကွေကော အခြိနျနညျးနညျးလငျ့တော့ မပွနါတော့ဘူးဒီမှာပဲအိပျတော့မယျဆိုပွီးပွောတော့ ဦးဇငျးက ကိုရငျလေးဖွဈပါ့မလား. နရေဲလို့လား..နရေဲတယျ ဦးဇငျး. ပဏ်ဍိလဲပါနတောပဲ တပညျ့တျောဘာမှလုပျတာမှမဟုတျတာ…
ဒါဆိုလဲ အိပျကှာ ခွငျထောငျတော့မရှိဘူး.ခွငျဆေးထှနျးအိပျဆိုပွီး ပေးအိပျတော့ ကြှနျတျောနဲ့ပဏ်ဍိလဲ ဖြာခငျးပွီး အိပျကော…
ကြှနျတျောကတော့ မအိပျခငျ စိတျထဲကနေ ဒီအဆောငျမှာရှိတဲ့သူက ဘယျလိုပုံစံလဲမသိဘူး. မွငျရရငျကောငျးမယျအဲလိုတှေးပီး.မအျိပျခငျဘုရားရှိခိုး. ပဏ်ဍိဘေးမှာဝငျတိုးအိပျတာပဲအိပျမပြျောခငျ ပဏ်ဍိကို..ပဏ်ဍိငါလကျတို့ရငျ ထနျော အိပျပုတျကွီးမနနေဲ့…
အေးပါကှာ ငါမအိပျပါဘူး တဈခုခုထူးခွားရငျ ခကျကုတျလိုကျ မငျးဘေးမှာငါရှိနတောပဲအဲဒါဆိုလဲပွီးရောဆိုပီးအိပျလိုကျတာ
မှေးခနဲဖွဈတဲ့အခြိနျ သင်ျကနျးကိုလာဆှဲသလိုခံစားလိုကျရတယျ မကျြလုံးကမဖှငျ့ကွညျ့ရဲဘူး. အဲဒါနဲ့ဘေးက ပဏ်ဍိကို လကျကုတျလိုကျတယျ ခဏနတေော့ ပဏ်ဍိက သူသိကွောငျးလကျပွနျကုတျတယျခဏနတေော့ သင်ျကနျးလာပွနျဆှဲပွနျရော သင်ျကနျးကလထေဲမှာလှငျ့နသေလို ခံစားမိတော့..
မကျြလုံးအသာလေးဖှငျ့ကွညျ့တာ တကယျအဟုတျပဲ. သင်ျကနျးက လထေဲမွောကျနတော တဈယောကျယောကျဆှဲနသေလိုပဲ အကောငျအထညျတော့မမွငျရဘူး ပဏ်ဍိလဲတှတေ့ယျ. အဲဒီအခြိနျ ဝုနးဆို ပဏ်ဍိ မတျတပျထရပျပွီး အဲဒီသင်ျကနျးဘေးကို ပွေးသှားပွီး လကျသီးနဲ့ထိုးနတော ကြှနျတျောမွငျတာကတော့ ပဏ်ဍိတဈယောကျထဲ…
ကွမျးပျေါမှာလိမျ့နတော ပါးစပျကလဲ အျောနတောမငျးလားကှ ..ဆိုပွီး လထေဲကိုထိုးနတော… ခဏကွာတော့ အသံတှကွေားလို့ အပျေါထပျမှာ အိပျနတေဲ့စာခဆြရာတျောဆငျးလာမ.ပဏ်ဍိလဲ အထိုးရပျလိုကျတယျ. တဈကိုယျလုံးလဲ ခြှေးတှေ ရှဲနဈနတောပဲ
ဟဲ့ ပဏ်ဍိ ဘာဖွဈတာလဲ.ဘုရား ဘယိကကောငျလဲမသိဘူး တပညျ့တော့သင်ျကနျးလာဆှဲလို့ ကွညျ့လိုကျတာ.. မဲမဲပုပု အကောငျတဈကောငျ ဖွဈနတော တဈခါမဟုတျနှဈခါမဟုတျဘူး လာလာဆှဲနတော..အဲဒါအဲဒီကောငျက တပညျ့တျောကို ထိုးမလားဆိုပွီး စိနျချေါတာ တပညျ့တျောလဲ ဒေါသထှကျပွီး ထိုးနတော သူကိုထိုးရတာ ဖှဲအိတျကိုထိုးနရေသလိုပဲ ကွာလာတော့ မောလာတယျ။
သူကတော့ဘာမှမဖွဈဘူးဦးဇငျးနိုးလာမှ ဒီကောငျ တံခါးဟထားတဲ့ ကွားကနေ ပွေးဆငျးသှားတယျ ။ကြှနျတျောလဲ ပဏ်ဍိပွောတာကို ပါးစပျအဟောာငျး သားနဲ့နားထောငျနတော..
ကြှနျတျောက ဘာမှကို မတှတေ့ာ. အဲတော့မှ ဦးဇငျးက ဒီကောငျ ဘာလာလုပျပွနျပီလဲမသိဘူးဦးဇငျး ဒီကောငျ အဲလိုလိုကျစနလေို့ မောငျးထုတျထားတာ…
အဲဒီကောငျက စနောကျရတာသဘောကတြယျ ထငျတယျ ဒီကြောငျးကို ဘယျသူမှမလာရဲအောငျ ကိုစနောကျတော့တာပဲ.ကဲကဲ ပွနျအိပျတော့ ဦးဇငျးလာအိပျပေးမယျဆိုပီး ဦးဇငျးက ကြှနျတေျာ့ကိုအလယျမှာထားပွီး လာအိပျပေးတယျ…
မနကျ အာရုဏျတကျတော့ ပဏ်ဍိက ကိုရငျထထထအာရုဏျဆှမျးကွှရမယျမကျြနှာသဈ .သင်ျကနျးရုံဆိုပွီးလာနှိုးတော့မှာ ကောကျထပွီး မကျြနှာသဈ.. သင်ျကနျးရုံပွီး အာရုဏျဆှမျးကွှ လိုကျသှားတာ.. ကိုရငျတှအေားလုံးတနျးစီပွီးကွှရတယျ ….
ကြှနျတျောက ၀ါစဉျအနညျးဆုံးဆိုတော့ နောကျဆုံး.. ကြှနျတျောရှမှေ့ာကတော့ ပဏ်ဍိ အဲလိုကွှလာတာ အပွနျကတြော့ အိမျသာတကျခငျြလာကေ. ကြောငျးကလဲ လမါးတဈကှကေ့နျြသေးတယျ…
ဒါပမေယျ့ ဘုရားပျေါကဖွတျသှားရငျ နီးနီးလေး အဲဒါနဲ့ ပဏ်ဍိကို ချေါပွီး ဘုရားပျေါကနေ ဖွတျတာ အခြိနျက အလငျးရောငျ မှုနျမှုနျလေးပဲမွငျနရေသေးတာဘုရားပျေါမှာလဲ မှောငျနတော ဘုရားပျေါကနဖွေတျလာတော့. …
ဘုနျးကွီးကြောငျးထဲအဝငျနားက သရကျပငျအောကျ ရောကျကောဒီတဈခါကြှနျတျောမွငျလိုကျတာ ပဏ်ဍိ ဟိုမှာ ဘာကောငျလဲ တှလေ့ားသရကျပငျ အောကျမှာငုတျတုတျထိုငျနတော မြောကျလားမသိဘူး.
မှောငျလဲမှောငျနတေော့ သိပျမသဲကှဲဘူးပဏ်ဍိက သခြောကွညျ့ပွီး ဟာဟိုကောငျ ညကကောငျငါ့ကိာစောငျ့နတောဖွဈမယျ။
ရော့ သပိတျကိုငျထား.. ဒီမှာရပျနဆေိုပွီး ခါးပနျးကွိုးကိုဖွုတျပွီး အဲဒီမဲမဲကောငျကို လိုကျရိုကျတာ. မဲမဲကောငျက ပထမတေော့ ပဏ်ဍိကို ပွနျလုံးတယျ… ဒါပမေယျ့ အနားမရောကျဘူး…
ပဏ်ဍိကနပွေီး ခါးပနျးကွိုးနဲ့ ဆီးရိုကျတ. ဖွနျးဖွနျးဖွနျး …အဲလို၃ခကျြလောကျထိကော ဟိုကောငျ ဝငျမလုံး တော့ပဲ မွကွေီးမှာလိမျ့နအေောငျအျောနတောပဏ်ဍိကလဲ ဘာမှတျနလေဲ မှတျထား .
အဲဒါဆရာတျော ခါးပနျးကွိုးကှ ဆိုပွီး ပွောလဲပွော ရိုကျလဲရိုကျ ခဏနတေော့ဟိုမဲမဲကောငျက ထပွေးတာ. ဘုရားဘေးက ဇရပျပကျြအနောကျ ထဲကိုဝငျပွေးသှားတာ ခဏနတေော့ ပဏ်ဍိ သပိတျလာပွနျယူတော့ ပဏ်ဍိ မငျးဆရာတျောခါးပနျးကွိုးဘယျလိုရလာတာလဲ..
ဟဲဟဲ ဒီကောငျ ဒီညထပျလာရငျ ရိုကျမလို့ ဆရာတျော လှမျးထားတဲ့ ခါးပနျးကွိုးခဏဖွုတျလာတာ ဒီကောငျက ညထိမစောငျ့ပဲ ပျေါလာတော့ ခါးပနါးကွိုးစာ ကြှေးလိုကျတာပေါ့
အဲဒါနဲ့ သပိတျကိုယျစီလှယျပွီး ဆှမျးစားဆောငျထဲ ဝငျတော့ ဆရာတျော ကွိမျလုံးကိုငျပွီးစောငျနေ့တယျ လာခဲ့ ၂ကောငျလုံးဆိုပွီး …ပဏ်ဍိကိုတော့ ခါးပနျးကွိုးကို ပိုငျရှငျမသိပဲ ယူတာ ခိုးတာပဲဆိုပွီး တရှမျးရှမျးနဲ့ ဗငျြးတော့တာပဲ. …
ကြှနျတျောကိုတော့ ဒုလ်လဘ မို့လို့ မရိုကျတော့ဘူး ခေါငျးကိုပဲ ဒေါကျကနဲ မွညျအောငျ ခေါကျပွီး သှား ဆှမျးသှားစားတော့..နောကျနကေ့စပွီး ကြှနျတျောလဲ ကြောငျးပွနျဖှငျ့တော့မှာမို့လို့ လူဝတျထှကျလိုကျရတယျ ပဏ်ဍိကတော့ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ ကနျြခဲ့တယျ. ကြှနျတျောလဲ အခြိနျရရငျ ရသလို ပဏ်ဍိနဲ့သှားတှပေ့ါတယျ။
ပဏ်ဍိလဲ ဓမ်မာစရိယတနျးအထိရောကျခဲ့တယျ.. နောကျပိုငျး အဆကျအသှယျပွတျသှားခဲ့တယျ အခုသတငျးကွားတာက လူထှကျပွီး မိနျးမရနပေီလို့ ကွားတယျ. ခုထိ ပွနျမတှရေ့တော့ဘူး ။
ဆရာတျောကတော့ ကြှနျတျော ဘုနျးကွီးကြောငျးရောကျဖွဈတဲ့အခါတိုငျးမငျးသူငယျခငျြး ပဏ်ဍိတော့ မိနျးမရသှားပီကှ မငျးပဲကနျြတော့တယျလို့ အမွဲပွောတယျ။
အခုရေးတဲ့စာကို တိုကျဆိုငျလို့ ပဏ်ဍိ ဖတျဖွဈခဲ့ရငျ ငါ့ဆီကို ဆကျသှယျပေးပါသတိရတယျကှာငယျငယျတုနျးက အခြိနျတှကေို
ဖြစ်ရပ်မှန် သတို့ သမီးသရဲ( ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ပါနှင့်)
(ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သဖြင့် နာမည်နေရပ်အတိအကျ မဖေါ်ပြတော့ပါ) ၁၉၉၆ လောက်က ခလရ(xx)က ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် မိတ္တီလာကို ခွင့်ပြန်လာပါတယ်။ဗိုလ်ကြီးက အသားဖြူဖြူအရပ်မြင့်မြင့် သူ့ချစ်သူဟာလည်း ရုပ်ချောလှပသူဖြစ်ရုံသာမက မြို့မျက်နှာဖုံး ချမ်းသာသူဖြစ်လေတော့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြ လိုက်ဖက်တဲ့ချစ်သူတွေ ဖြစ်ပြီး အားလုံးကအားကျရတဲ့စုံတွဲပါ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကလည်း မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ပျော်မဆုံး မော်မဆုံးနဲ့ …
သူနေတဲ့ အပင်အောက် အပေါ့သွားမိတဲ့ ကောင်လေးကို ကြိုက်မိပြီး ပေါင်းသင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သရဲမ (ဖြစ်ရပ်မှန်
ဘိုကလေး မြို့ နယ်ထဲ က ရွာ လေးတစ်ရွာ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန် က နာ ဂစ် မဖြစ်ခင် ၂၀၀၇ လောက် က ပါ။ အဲဒီ မှာ NGO တစ်ဖွဲ့က ပတ် ၀န်း …
မကွေးတိုင်း ရေစကြို မြို့နယ်အတွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာခြောက်တဲ့ တစ္ဆေ (ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ)
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာခြောက်တဲ့ တစ္ဆေ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၇ လပိုင်းကျော် ၈ လပိုင်းအတွင်းက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသများအတွင်း စံချိန်တင်ရေကြီးရေလျှံ မှု ကြီး ဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာလအတွင်းမှာ မကွေးတိုင်း ရေစကြို မြို့နယ်အတွင်းရှိ ချင်းတွင်းမြစ် တစ်ဖက်ကမ်း က ရွာလေးတစ်ရွာမှာအမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ …
ကမ္မဝါစာ- ပရိတ်​တရား​တော်​ အစွမ်း အံမခန်းပါ
သံဃာ​တော်​အရှင်​သူမြတ်​တို့ဓမ္မစက်​ဖြစ်​တဲ့ ကမ္မဝါစာ- ပရိတ်​တရား​တော်​ အစွမ်း အံမခန်းပါ🙏🙏🙏 ဖုန်းထဲမှာ ​ဆောင်​ထားသင့်​၏ 🙏🙏🙏 ​ဘေးအန္တရာယ်​ကင်း ​တရား​တော်​မြတ်​ပါ🙏🙏 crd;htay htay &; =============== 🙏🙏🙏 ကမ္မဝါစာ အဖတ် သတိပြုကြဖို့ရာ 🙏🙏🙏 🙏ကမ္မဝါစာ ဖတ်တဲ့နေရာမှာ စာသွားမပြိုင်ကြပါနဲ့။ စာသွားပြိုင်ပြီးတော့ အများကြီးနဲ့ …
ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်း တဲ့ အိမ်ကြီး​
ဦးအောင်ဖူး နှင့် ဒေါ်မယ်တို့တွင် သားသမီး ၅ ဦးဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မိန်းကလေး ၂ ယောက် ယောကျာ်းလေး ၃ ယောက်နှင့် ပျော်စရာမိသား စုကမ္ဘာလေးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ဦးအောင်ဖူးသည် ဆန်စက် ဆီကြိတ်စက် လယ်ဧကများစွာ ကျွဲ နွားများကိုပိုင်ဆိုင်သည့် တောသူဌေးတစ်ဦးပင်ဖြစ်လေသည်။ အိမ်ဆို သည်လည်း ထိုခေတ်က ပျဉ်ထောင် …